Marka hore Darajada Sare ee Fasalka Dabeecadaha # 183
Sidee looga gudbi karaa walaac, Qaybta 59aad
Ku soo dhawoow Fasalka Xagga Sare ee Darajada Koowaad ee Christian. Anigu waxaan ahay Daniel Whyte III, madaxweynaha Injiilka Jannada Nuur iyo wadaad ka mid ah Injiilka Jannada Layoutka International. Ujeedada wakhtigan xaadirka ah waa in la baro rumaystayaasha dhalinyarada ah wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay u ogaadaan rumaysadkooda Ciise Masiix iyo siinayaan aqoonta ay u baahan yihiin si ay ugu noolaadaan nolol Masiixi ah.
Aayaddeenna muhiimka ah ee Kitaabka Quduuska ah waa 1 Korintos 10:13:
Ma jiro dhibaato in lagaa qaaday laakiin dadka Ilaah bay ka yihiin. Laakiin Ilaah waa aamin yahay, mana jiri doonto idinkoo ku dadaalaya isku dadaalkii aad igu aragteen oo haatanna aad igu maqashaan. laakiin jirrabaadda ha ku sii adkaanina, si aad u awooddid inaad ku socotaan.
Casharkeena maanta waxaa lagu magacaabaa "Sidee looga gudbi karaa walaac, qaybta 59"
Qeybtaan oo ah nooca Quduuska ah ee Roomaankeenna ah, waxaanu sii wadaynaa inaanu eegno waxyaabo gaar ah oo ah, sida Kitaabka Quduuska ah uu leeyahay, "caadi ahaan nin." Waxaan fiirineynaa waxa Kitaabka Quduuska ah ee ku saabsan dembiyadan si aan u ogaanno khatarteeda iyo si aan ugu qarsoodi karno Qorniinka qalbiyadeenna si aan u isticmaalno marka aynu jirno.
Dembiyada aan sii wadeyno inaan sii socono maanta waa dembiga ah "rabitaan". Tani waa dembiga sadexaad ee liiska 12 jiritaan oo ka yimid labo ilo - hal qadiimi ah iyo mid casri ah. Ilaha ugu horeeya waa liis ay soo saareen ra'yiga kaniisadda hore oo loo yaqaan "toddoba dembi daa'im ah" ama "dembiyadii dembiyada." Ilaha labaad ayaa ah sahanka Barna laga soo bilaabo 2011 kaas oo la socdey dareenka ugu sarreeya ee Maraykanku qirtay in uu la halgamay.
Maanta, waxaan sii wadi doonaa fiirinta Yacquub 1: 13-15. (Xusuusnow, qoraalka casharkan waxaa laga heli karaa internetka kadib fasal kasta, sidaa darteed waxaad u tegi kartaa boggayaga internetka GLHOPI.com, guji bogga "Goobta Muslimiinta ah" oo ku taal bogga, oo bilow inaad barato aayadahaan wadnaha oo dhan toddobaad.)
Yacquub 1: 13-15
13 Ninna yuusan odhanin, isagoo jirrabaya, oo Ilaah ka gees ah ayuu baadhaa, waayo, kolleyba lama sii wadi karo, mana uu sii dayn qof keliya.
14 Laakiin nin walba waa jiraa markuu xumaan falay, oo uu wax ku dhufto.
Mawduucani wuxuu inoo sheegayaa in ilaha ugu weyn ee jirradu uusan ahayn Ibliiska, ama adduunka, laakiin jidhkeena wayn. Waa noo "rabitaankeena" ee inaga naga fogeynaya waddada toosan iyo cidhiidhiga ah. Dadka intooda badani waxay u maleynayaan haddii ay wax ka yimaadaan oo ay ku raaxaystaan, markaa waa inaysan aheyn wax xun. Laakiin Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo sheegayaa in damaca jidhku uu "uuraysto oo dembi u keeno; dembiguna markuu dhammeeyo, wuxuu keenaa dhimasho."
Erayga Giriigga ah ee loo tarjumay "rabitaan" waa erey ahaan iyo ruux ahaanba dhexdhexaad ah kaas oo si fudud u muujinaysa joogitaanka rabitaan xoogan ama dareen, rabitaan iyo dulqaad. Marka aynu niyadjabaynno ama xurmaynayno waxa loola jeedo waxyaalaha sharka leh, waxa ay noqotaa jarribaan. Haddaynu raacno niyad-jibaadkeenna oo u oggolaano in jidhkeenu ku socdo jidkeeda, waxay uur leedahay dembiga maanka. Grant Richison ayaa qoray, "Waxaa jira awood wayn oo maskaxiyan leh, oo masiixiyadu waa inay la shaqeeyaan dembiga marka la eego jarribaadda, ee aan ahayn marka aynu dooranno denbiga markaanu dooranno inaan nafteena u furno denbiga, falalka ugu xun ee dembiga maaha mid aan ku dhicin, midkeenna kama jiri karno jeesjeeska, ma aha dembi in la jirrabo, laakiin waa dembi u keenaya jirrabaadda. Fikradaha xun waxay ku dhalan doonaan maskaxdeenna ilaa aan ka hor iman karno Badbaadiyeheenna. Telefishanka maanta wuxuu soo bandhigayaa jaahwareer weyn oo uu u qabo qofka rumeeysanaya, wuxuu jecelyahay in uu maskaxdeena ku soo rogo gawaaridan, taas oo si lama filaan ah oo dhaqso ah u timaada. " Saameyntanu waxay isku dhafan yihiin dabeecadeena dabiiciga ah ee jidhka ah, waxaannu abuurnaa kakooban xoog leh. Si kastaba ha ahaatee, waa inaanan ku dhicin.
Haddaynu u gudubno jirrabaadda iyo denbiga, Baybalku wuxuu inoo sheegayaa in "dembigu, goortii la dhammeeyo, dhimasho keeno." Ereyga Giriiggu wuxuu tarjumay "dhammaystir" waxa loola jeedaa "si buuxda u koray." Mudanayaal iyo marwooyin, dembigu waa wax nool. Waxay bilaabi kartaa ilmo yaryar ee nolosheena, laakiin haddii aanan si dhakhso ah u shubin, waxay ku kori doontaa dhalinyaro madax-bannaan, oo aan dooneynin inay isbeddelaan, ugu dambeeynna qof weyn, oo siyaabo kale u dejiya. Dembiga oo loo ogol yahay inuu kiciyo oo koro natiijooyinka dhimashada. Qofka rumaystaha ah, tani macnaheedu waa inuu joojiyo awoodda Ruuxa Quduuska ah ee noloshiisa iyo ka goosashada xidhiidhkiisa uu la leeyahay Ilaah. Steven Cole ayaa yiri, "Yacquub waxa uu muujinayaa in dembigu marnaba joogsanaynin, si joogto ah ayuu u socdaa ujeedadiisa, dhammaadkiisa qarsoodi ah - dhimasho, dembigu wuxuu u eg yahay jab yar oo biyo ah. haddii aan si dhakhso ah loo dayactirin, waxay u horseedi kartaa burburkii gebi ahaanba, taasoo keenaysa burbur aad u xun. "
Ha u oggolaan in aad damqato in aad damqato. Ha u ogolaanin in jimicsigu keeno dembiga. Ha u oggolaan in dembigu keeno dhimasho.
Haddii aad la halgamayso rabitaan ama dembi kasta, raac jadwalkan qalbiga iyo inaad bilowdo inaad isticmaasho marka xigta ee aad la kulantid jeesjeeskaas.
Haddii aadan garanayn Ciise Masiix oo ah Badbaadiyahaaga, Yooxanaa 3:16 wuxuu leeyahay "Waayo, Ilaah duniduu u jeclaa, oo wuxuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay, in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin, laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah."
Kitaabka Quduuska ah wuxuu sidoo kale sheegayaa Rooma 10: 9 iyo 13: "Haddii aad afkaaga ku qirto Rabbi Ciise, oo aad rumaysan tahay in Ilaah aad isaga sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa ... oo waxay u dhawaaqi doonaan magicii Rabbiga.
Haddii aad aaminsan tahay in Ciise Masiix uu ku dhintay iskutallaabtaada dembiyadiinna aawadiis, waa la aasay, oo ka soo sara kacay kuwii dhintay, oo aad doonaysid inaad ku aamino badbaadadaada maanta, fadlan ila soo ducee tukashadan fudud: Aabbaha Quduuska ah, waxaan ogahay in aniga Anigu waxaan ahay dembiile iyo in aan sameeyo waxyaabo xun noloshayda. Waxaan ka xumahay dembiyadayda, waxaana doonayaa in aan ka noqdo dembiyadayda. Waayo, Ciise Masiix aawadiis, dembiyadaydii i cafi. Hadda waxaan rumaysanahay qalbigayga oo dhan in Ciise Masiix aniga igu dhintay, la aasay, oo mar kale kor u kacay. Waxaan isaga ku kalsoonahay sidii Badbaadiyahayga ah oo isaga raaca isaga oo ah Rabbiga ilaa maanta. Rabbi Ciise, fadlan kaligeyga geli oo naftayda badbaadi oo noloshayda iska bedesho maanta. Aamiin.
Haddii aad ku kalsoon tahay Ciise Masiix sidii Badbaadiyehaaga, oo aad tukatid tukashadan oo macneheedu yahay in aad ka timid, waxaan idiin sheegayaa in ku salaysan ereyga Ilaah, hadda waxaad ka badbaadsan tahay Jahannama oo waxaad ku socotaa jannada. Ku soo dhawaada qoyska Ilaah! Waxaan rabaa inaan kuu hambalyeeyo inaad sameyso waxa ugu muhiimsan nolosha iyo in la helo Ciise Masiix inuu yahay Rabbiga iyo Badbaadiyaha. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah si aad uga caawiso inaad kor ugu qaaddo rumaysadka cusub ee Masiixa, u gudub Gospel In Light Society.com oo akhri "Waxa aad sameyneyso marka aad gasho albaabka". Ciise Masiix wuxuu ku yiri Yooxanaa 10: 9, "Anigu waxaan ahay albaab, haddii qof uun galo, wuu badbaadi doonaa, oo wuu iman doonaa, oo geli doonaa, oo wuxuu heli doonaa daaqsin."
Ilaa wakhtiga xiga, Rabbigu ha kuu duceeyo!